MongoDB 5.0 waxay ku timaadaa xog qaab taxane ah waqtiga, isbeddelada tirada iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Nooca cusub ee MongoDB 5.0 durba waa lasii daayay iyo qaabkan cusub warar aad u xiiso badan ayaa la soo bandhigayaa kuwaas oo aan ku iftiimin karno xog aruurinta qaabka taxanaha waqtiga, iyo sidoo kale taageerida xakamaynta nooca API, taageerida habka Live Resharding, iyo kuwo kale.
Kuwa aan aqoon u lahayn MongoDB, waa inaad ogaataa taas DB-daani waxay taageertaa keydinta dukumintiyada qaab JSON u eg, wuxuu leeyahay luuqad jilicsan oo jilicsan oo abuureysa weydiimaha, wuxuu u abuuri karaa tusmooyin sifooyin kala duwan oo la keydiyay, wuxuu si wax ku ool ah u bixiyaa keydinta walxaha waaweyn ee laba-geesoodka ah, wuxuu taageeraa howlaha diiwaangelinta si loo beddelo loona daro xogta keydka, wuxuu u shaqeyn karaa iyadoo la raacayo muuqaalka Khariidadda / Yaraynta, wuxuu taageeraa soo-celinta iyo dhisida qaabab qalad u dulqaadasho leh.
Astaamaha cusub ee ugu muhiimsan MongoDB 5.0
Qaabkan cusub waxaan ku heli karnaa taas Nidaamka lambar bixinta dhibaatada ayaa la beddelay waxaana loo wareejiyay jadwalka qaabeynta la saadaalin karo. Hal mar sanadkii, nooc muhiim ah ayaa la sameyn doonaa (5.0, 6.0, 7.0), seddexdii biloodba mar, noocyo kumeelgaar ah oo leh astaamo cusub (5.1, 5.2, 5.3) iyo, sida loogu baahdo, cusbooneysiinta saxda ah ee cilladaha iyo dayacanka (5.1. 1, 5.1.2, 5.1.3 .XNUMX) .
Noocyada ku-meel-gaarka ah waxay u abuuri doonaan shaqeynta nooca weyn ee soo socda, taas oo ah, MongoDB 5.1, 5.2 iyo 5.3 ayaa ku dari doona shaqooyin cusub nooca MongoDB 6.0.
Sida loogu talagalay sheekooyinka cusub ee lagu soo bandhigay qaybtan cusub ee Mongo DB5.0 Waan heli karnaa inaan ogahay ku darey taageerada loogu talagalay xakamaynta nooca API, kaas oo kuu ogolaanaya inaad codsi ku xirto xaalad API gaar ah oo aad baabi'iso khataraha la xariira ku xadgudubka dib u dhigista ee suurtogalka ah marka aad u guureyso noocyo cusub oo DBMS ah. Xakamaynta nooca API kala sooca wareegga nolosha ee dalabka iyo wareegga nolosha ee xogta waxayna awood u siineysaa horumariyayaashu inay isbedel ku sameeyaan arjiga markii loo baahdo inay ka faa'iideystaan ​​awoodaha cusub, intii ay u wareegi lahaayeen nooc cusub oo xog-ururin ah.
Wax cusub oo cusub ayaa ah xog aruurinta qaabka taxanaha waqtiga kuwaas oo horeyba loogu hagaajiyay inay keydiyaan qaybo ka mid ah qiyamka qiyaasta ee la duubay waqtiyo cayiman (waqti iyo qiimeyaal u dhigma waqtigan). MongoDB waxay ula dhaqantaa ururintaas aragtiyo aan muuqan oo duuban laga abuuray uruurinta gudaha isla markaana si otomaatig ah u uruurisa xogta taxanaha waqtiga qaab qaab kaydineed oo la hagaajiyay markii la geliyo.
Waxaa kale oo la xusay in lagu daray taageerida habka Live Resharding, taas oo kuu oggolaaneysa inaad bedesho furayaasha sharding ee loo isticmaalo kuleylka duulimaadka adigoon joojin DBMS.
Sidoo kale taageerida howlaha falanqaynta ee kuu oggolaanaya inaad waxqabadyo ku sameyso go'an cayiman dukumiintiyada ku jira ururinta. Si ka duwan howlaha isu geynta, shaqooyinka daaqadu kuma burburaan koox koox ah, laakiin wadar ahaan marka la isu geeyo iyada oo ku saleysan waxa ku jira "daaqad" oo ay ku jiraan hal ama dhowr dukumiinti oo ku jira natiijada.
Sidoo kale, Awoodaha sirta goobta ayaa lagu ballaariyey dhinaca macmiilkasida aad hadda dib u qaabeyn karto miirayaasha x509 iyo wareejinta shahaadada adigoon joojin DBMS. Taageero dheeraad ah loogu daray qaabeynta suufka TLS 1.3.
MongoDB Shell wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xirto DBMS, bedesho qaabeynta oo aad u dirto weydiimo. Waxay taageertaa is-buuxinta caqli-galka ah ee muujinta MQL, amarka iyo habka soo gelinta, muujinta qoraalka, tilmaamaha macnaha guud, farriimaha qaladka, iyo awoodda lagu ballaariyo shaqeynta iyada oo loo marayo fiilooyin
Isbeddelada kale la soo bandhigay:
Soo hel, tiri, kala duwanaansho, wadar ahaan, khariidad yaree, liisaska, iyo Liisaska Indexes dib looma xirayo haddii hawlgalku socdo isla waqtigaas maadaama uu helayo quful gaar ah oo ku saabsan dukumiintiyada uruurinta.
Iyada oo qayb ka ah dadaallada looga saarayo ereyada siyaasad ahaan khaldan, amarka isMaster iyo habka db.isMaster () ayaa loo beddelay hello iyo db.hello ().
Qadiimiga "mongo" CLI waa la duudsiyey waana laga saari doonaa siidaynta mustaqbalka.
Ugu dambeyntiina, haddii aad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato, waad la tashan kartaa faahfaahinta xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » MongoDB 5.0 waxay ku timaadaa xog qaab taxane ah waqtiga, isbeddelada tirada iyo inbadan